अय्युब ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
एलिपज अझै बोल्छन्‌ (१-२७)
‘परमेश्‍वर बुद्धिमान्‌हरूलाई तिनीहरूकै चालमा फसाउनुहुन्छ’ (१३)
‘परमेश्‍वरको अनुशासनलाई अय्युबले इन्कार गर्नु हुँदैन’ (१७)
५ “एकचोटि पुकारी हेर्नुहोस्‌, तपाईँलाई कसले जवाफ दिन्छ? तपाईँको पुकारा सुन्‍ने पवित्र जन* को छ? २ मूर्ख मानिस आफ्नै रिसले नाश हुन्छ।डाहले निर्बुद्धि मानिसको पतन हुन्छ। ३ मूर्खको फलिफाप भए पनिअचानक त्यसको उठीबास लागेको मैले देखेको छु। ४ त्यसका बालबच्चालाई विपत्तिले ढुकिबस्छ।सहरको मूलढोकामा तिनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ।+ तिनीहरूलाई बचाउने कोही हुँदैन। ५ त्यसको उब्जनी भोकाहरूले लुट्‌छन्‌।काँडाहरूबीच बाँकी भएका पनि लैजान्छन्‌।त्यसको सबथोक खोसिन्छ। ६ विपत्ति माटोबाट आफै पलाउँछ र?सङ्‌कट जमिनमा फल्छ र? ७ आगो बल्दा झिल्का निस्किएझैँमानिसले जन्मिएपछि दुःख त पाउँछ नै। ८ म तपाईँको ठाउँमा भएको भएपरमेश्‍वरलाई अवश्‍य बिन्ती गर्ने थिएँ।मेरो मामिला उहाँसामु पेस गर्ने थिएँ। ९ जसले अचम्म-अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ,जसले बनाएका कुराहरू आश्‍चर्यजनक र अनगिन्ती छन्‌। १० उहाँले नै पृथ्वीमा पानी बर्साउनुहुन्छर जमिनलाई भिजाउनुहुन्छ। ११ उहाँ असहायलाई मदत गर्नुहुन्छ,पिछडिएकाहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। १२ उहाँले धूर्तहरूको षड्‌यन्त्र विफल पार्नुहुन्छर तिनीहरूको योजना अधुरै रहन्छ। १३ उहाँले बुद्धिमान्‌हरूलाई तिनीहरूकै चालमा फसाउनुहुन्छ+र बठ्‌याइँ गर्नेहरू असफल हुन्छन्‌। १४ दिउँसै तिनीहरूलाई अन्धकारले छोप्छ,तिनीहरू रातमा जस्तै छामछाम छुमछुम गर्दै हिँड्‌छन्‌। १५ उहाँले सोझालाई तिनीहरूको तरबारजस्तो बोलीबाटर दरिद्रलाई बलियाहरूको पन्जाबाट जोगाउनुहुन्छ। १६ त्यसैले असहायहरूको निम्ति आशा छतर दुष्टको मुखमा भने बुजो लाग्छ। १७ परमेश्‍वरबाट हप्की पाउने मानिस त धन्यको हुन्छ।त्यसैले सर्वशक्‍तिमान्‌ परमेश्‍वरको अनुशासनलाई इन्कार नगर्नुहोस्‌। १८ उहाँ चोट दिनुहुन्छ तर मलहमपट्टि पनि गर्नुहुन्छ।घायल पार्नुहुन्छ तर फेरि आफ्नै हातले निको पार्नुहुन्छ। १९ उहाँले तपाईँलाई छ वटा विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ;सातौँले समेत तपाईँलाई हानि गर्नेछैन। २० अनिकालमा भोकभोकै मर्न दिनुहुनेछैन।युद्धमा तरबारले काटिन दिनुहुनेछैन। २१ निन्दा गर्ने बोली तपाईँले सुन्‍नुपर्नेछैन।+विपत्ति आउँदा तपाईँ डराउनुपर्नेछैन। २२ विनाश र भोकमरीले तपाईँलाई छुनेछैन।जङ्‌गली जनावरदेखि तपाईँ डराउनुपर्नेछैन। २३ खेतको ढुङ्‌गा तपाईँको लागि बाधा बन्‍नेछैन।*जङ्‌गली जनावरले तपाईँलाई आक्रमण गर्नेछैन। २४ तपाईँको पाल सुरक्षित रहनेछ।तपाईँको बगालबाट एउटै जनावर हराउनेछैन। २५ तपाईँका छोराछोरी थुप्रै हुनेछन्‌अनि तपाईँका सन्तान लहलहाउँदा घाँसजस्तै प्रशस्त हुनेछन्‌। २६ बेला पुगेपछि भित्र्याइने बालीजस्तैचिहानमा जाने दिनसम्म पनि तपाईँ हट्टाकट्टा नै रहनुहुनेछ। २७ हामीले यो कुरा जाँचेर पक्का गरेका छौँ; त्यसैले हाम्रो कुरा सुन्‍नुहोस्‌।”
^ यसले स्वर्गदूतलाई जनाएको हुन सक्छ।
^ वा “तपाईँसित करार बाँध्नेछ (सम्झौता गर्नेछ)।”